Fetin'ny reny any Russia | Fitsangatsanganana tanteraka
Fetin'ny reny any Russia
Isabel | | Rosia
Fetin'ny reny dia andro fialantsasatra manokana iray ankalazaina manerantany mba hahatsiarovana ny reny rehetra sy hisaorana ny fitiavana sy ny fiarovana omen'izy ireo ny zanany hatramin'ny nahaterahany.
Satria fankalazana iraisam-pirenena izy io, isaky ny firenena dia ankalazaina amin'ny andro samy hafa izy, na dia ny ankapobeny aza matetika dia ny Alahady faharoa amin'ny Mey. Na izany aza, Fetin'ny Reny any Rosia dia amin'ny daty hafa. Te hahafantatra ny fomba fankalazana azy eto amin'ity firenena ity ve ianao?
1 Manao ahoana ny fetin'ny reny any Russia?
2 Inona no niandohan'ny Fetin'ny Reny?
3 Rahoviana no ankalazaina any amin'ny firenena hafa ny Fetin'ny Reny?
3.8 Portugal sy Espana
Manao ahoana ny fetin'ny reny any Russia?
Nanomboka nankalazaina ny taona Fetin'ny Reny tany Russia tamin'ny 1998, rehefa nankatoavin'ny lalàna teo ambanin'ny governemanta Borís Yeltsin izany. Nanomboka tamin'izay dia natao tamin'ny alahady farany novambra isan-taona.
Satria fankalazana vaovao somary vaovao ity any Russia, dia tsy misy fomban-drazana napetraka ary samy mankalaza izany araka ny fombany avy ny fianakaviana tsirairay. Na izany aza, ny ankizy dia manao karatra fanomezana sy asa tanana vita tanana mba hisaotra ny reniny noho ny fitiavany sy maneho ny fihetsem-pony.
Ny olon-kafa dia manao fiaraha-misakafo manokana ho an'ny fianakaviana ka manome fehezam-boninkazo tsara tarehy ho an'ny reny ho mariky ny fankasitrahany, miaraka amina hafatra feno fitiavana.
Na izany na tsy izany, ny tanjon'ny Fetin'ny Reny any Russia dia ny hampiroborobo ny soatoavin'ny fianakaviana sy ny dikan'ny fitiavan'ny reny ny zanany ary ny mifamadika amin'izany.
Inona no niandohan'ny Fetin'ny Reny?
Azontsika atao ny mahita ny niandohan'ny Fetin'ny Reny tany Gresy taloha 3.000 XNUMX taona mahery lasa izay rehefa nankalazana ny fankalazana an'i Rea, ny renin'ny titanic andriamanitra manan-danja toa an'i Zeus, Hades ary Poseidon.
Ny tantaran'i Rea dia milaza fa namono an'i Cronos vadiny izy mba hiarovana ny ain'ny zanany lahy Zeus, satria efa nihinana ireo zanany teo aloha izy mba tsy ho voaroaka hiala amin'ny seza fiandrianana toa ny nataony tamin'i Uranus rainy.
Mba hisakanana an'i Cronos tsy hihinana an'i Zeus, dia namolavola drafitra i Rea ary nanamboarany vato misaron-kofehy hohanin'ny vadiny, ary nino fa zanany io fony izy nihalehibe tao amin'ny nosy Kreta. Rehefa tonga olon-dehibe i Zeus, dia nahavita nampisotro an'i Crono zava-mahadomelina i Rea ka lasa nandoaka ny zanany sisa.
Noho ny fitiavana nasehony tamin'ny zanany dia nanome voninahitra azy ny Grika. Taty aoriana, rehefa naka ny andriamanitra grika ny Romana dia nandray an'io fankalazana io koa izy ireo ary tamin'ny tapaky ny volana martsa dia natao hateloana ho an'ny andriamanibavy Hilaria tao amin'ny tempolin'i Cibeles any Roma (maneho ny Tany).
Taty aoriana, novain'ny Kristiana ity fialantsasatra avy amin'ny mpanompo sampy ity ho lasa hafa mba hanomezam-boninahitra an'i Maria Virjiny, renin'i Kristy. Ao amin'ny olomasina katolika amin'ny 8 desambra no ankalazana ny Immaculate Conception, daty izay noraisin'ireto mpino ireto hankalazana ny fetin'ny reny.
Efa tamin'ny taonjato faha-1914, ny filohan'ny Etazonia Woodrow Wilson dia nanambara tamin'ny Alahady faharoa tamin'ny Mey ho toy ny Fetin'ny Reny ofisialy, fihetsika iray izay re hatrany amin'ny firenena maro hafa manerantany. Na izany aza, ny firenena sasany manana fomban-drazana katolika dia nanohy nitandrina ny fialantsasatra tamin'ny desambra na dia nosarahin'i Espana aza izy io mba hamindrana azy amin'ny alahady voalohany amin'ny volana Mey.
Rahoviana no ankalazaina any amin'ny firenena hafa ny Fetin'ny Reny?
Ity firenena ity dia mankalaza ny Fetin'ny Reny amin'ny Alahady faharoa amin'ny Mey. Ny voalohany nanao izany tamin'ny fomba ahalalantsika azy dia i Anna Jarvis ho fanomezam-boninahitra ny reniny efa nodimandry tamin'ny Mey 1908 tany Virginia. Taty aoriana dia nanao fampielezan-kevitra izy hanangana ny Andron'ny Reny ho toy ny fialantsasatra nasionaly any Etazonia, ary nambara izany tamin'ny 1910 tany West Virginia. Avy eo dia hanaraka azy haingana ny fanjakana hafa.
Any Frantsa, ny Fetin'ny Reny dia fomba amam-panao vao haingana, satria nanomboka nankalazaina izy tamin'ny taona XNUMX. Talohan'izay, andro vitsivitsy ny ezaky ny vehivavy sasany izay niteraka zaza betsaka hanampiana amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny isan'ny olona maty ao amin'ny firenena taorian'ny Ady Lehibe dia nekena ary nahazo medaly mendrika aza.
Amin'izao fotoana izao dia ankalazaina amin'ny alahady farany amin'ny volana Mey raha tsy mifanandrify amin'ny Pentekosta. Raha izany dia atao ny Alahady voalohany amin'ny volana Jona ny Fetin'ny Reny. Na inona na inona daty, ny fomban-drazana dia ny hanomezan'ny zaza mofomamy miendrika voninkazo ny reniny.
Ao amin'ity firenena Aziatika ity dia fankalazana vaovao ihany koa ny Fetin'ny Reny, saingy mihamaro hatrany ny Sinoa mankalaza ny Alahady faharoa amin'ny Mey miaraka amin'ny fanomezana sy fifaliana be miaraka amin'ny reniny.
Ny Fetin'ny Reny dia ankalazaina ao Mexico amin'ny hafanam-po be ary daty lehibe io. Ny fankalazana dia manomboka ny iray andro lasa izay, raha ny fanao dia ny fampitahoran'ny ankizy ny reniny na ny renibeny, na amin'ny alàlan'izy ireo manokana na amin'ny alàlan'ny fanakaramana ny serivisin'ireo mpitendry zavamaneno matihanina.
Ny ampitson'io dia misy fotoam-pivavahana manokana any am-piangonana ary omen'ny ankizy an-dreniny ny fanomezana noforoniny tany am-pianarana ho azy ireo.
Ny renin'ny mpanjakavavin'i Thailand, Andriamatoa Sirikit, dia heverina ho renin'ny olom-peheziny Thai rehetra nankalaza ny Fetin'ny Reny tamin'ny tsingerintaona nahaterahany (12 Aogositra) hatramin'ny 1976 ny governemanta. Fetim-pirenena io izay ankalazaina amin'ny fomba miaraka amin'ny afomanga sy labozia maro.
Ny Fetin'ny Reny tany Japon dia nanjary nalaza taorian'ny Ady Lehibe Faharoa ary ankalazaina amin'ny Alahady faharoa amin'ny Mey izao.
Ity fialantsasatra ity dia miaina amin'ny fomba tokantrano sy fomba nentim-paharazana. Matetika ny ankizy dia manao sarin-dreniny, manomana lovia izay nampianariny azy ireo hahandro ary manome azy ireo koa mavokely mena na mena rehefa maneho ny fahadiovana sy ny hamamin'izy ireo.
Fetin'ny reny any Angletera dia iray amin'ireo fialantsasatra tranainy indrindra any Eropa. Tamin'ny taonjato faha-XNUMX, ny Alahady fahefan'ny Karemy dia nantsoina hoe Alahady Reny ho fanomezam-boninahitra an'i Maria Virjiny. ary nanararaotra niara-nivory ny fianakaviana, nandeha nanao lamesa ary niara-nandany ny tontolo andro.
Amin'ity andro miavaka ity dia manomana fanomezana isan-karazany ho an'ny reniny ny ankizy, saingy misy iray izay tsy azo adino: ny Simnel Cake, mofomamy misy voankazo matsiro miaraka amin'ny paty amandy eo amboniny.
Portugal sy Espana
Na tany Espana na tany Portugal, dia nankalazaina tamin'ny 8 Desambra ny Fetin'ny Reny tamin'ny fotoana nananganana ny Immaculate Conception nefa dia nizara roa izy io ary nisaraka ireo fety roa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Fetin'ny reny any Russia
Inona ireo orinasa aostraliana lehibe indrindra?
Ny angano an'i Apollo